အကောင်းဆုံးအိပ်စက်ခြင်းဖြေရှင်းနည်းများ: နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စွာအိပ်စက်ခြင်း (၂၀၁၉) - ကျန်းမာရေး | ဇွန်လ 2022
အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန် သတင်း၊ ကုမ္ပဏီ, အဆိုပါကုန်ပစ္စည်း ဖျော်ဖြေရေး သတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကျန်းမာရေး ဆီးဂိမ်း ကျန်းမာရေးပညာရေး ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီသတင်း ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ ကုန်ပစ္စည်း ကနျြးမာရေးပညာရေး, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ
အဓိက >> ကျန်းမာရေး >> အကောင်းဆုံးအိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာဖြေရှင်းနည်း ၁၀ မျိုး
တစ်ညအိပ်စက်ခြင်းကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း အိပ်စက်ခြင်း tracker ၎င်းသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပိုမိုကောင်းမွန်သောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်အထောက်အကူပြုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းဤတက်ကြွစွာအိပ်စက်ခြင်းနည်းလမ်းများသည်သင့်အားပိုမိုမှိန်းရန်ကူညီလိမ့်မည် ဒီည
(သင်၏အဖော် (သို့မဟုတ်အိပ်စက်သူ) ကသင်ဟောက်သည်ဟုညည်းညူလျှင်သင်စစ်ဆေးချင်ပေမည် ဒီ ထွက်!)
RE Botanicals မှ Hemp Peppermint Tincture Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အပြည့်အ ၀ spectrum လျှော်ဆီ
စျေးနှုန်း: ၆၇.၉၉ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
Comfort-U Total Body Support Pillow Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
စျေးနှုန်း: ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
Neuro Night Essentials Sleep Supplement Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
စျေးနှုန်း: ၄၁.၅၀ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
Smart Nora, Under-Pillow Stop Snoring Device ဖြစ်သည် Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော setting များစွာ
စျေးနှုန်း: ဒေါ်လာ ၂၃၂.၀၉ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
Celestial Seasonings မှ Sleepytime Extra Wellness Tea Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
သင့် ဦး နှောက်ကိုသဘာဝအတိုင်းပိတ်ပစ်ရန်ကူညီသည်
လည်ချောင်းကိုသက်သာစေပြီး sinus များကိုဖွင့်ပေးသည်
စျေးနှုန်း: ဒေါ်လာ ၂၃.၃၄ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
RELAX, Lavender & Chamomile Pillow Mist Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
100% သန့်ရှင်းသော theraputic မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီ
စျေးနှုန်း: $ 22.99 Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
100% မီးပျက်ကုလားကာများ - အသံလုံကုလားကာပြားများ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
အထုပ်တစ်ခုလျှင် ၂ ပြား
Soundproof နှင့် lightproof ဖြစ်သည်
စျေးနှုန်း: ၃၈.၉၅ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
Bose Noise Masking Sleepbuds များ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
စျေးနှုန်း: ၂၉၉.၀၀ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
Xlear Nasal Spray ကို Xylitol နှင့်တိုက်သည် Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
စျေးနှုန်း: ၁၀.၉၇ ဒေါ်လာ Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ ယခုစျေးဝယ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏သုံးသပ်ချက်ကိုဖတ်ပါ
Lavender Epsom ဆား (၁ ဂါလံပုံး၊ ၈ ပေါင်) Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
မင်းရဲ့ SO အတွက်အရမ်းကောင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်ဘဲ။
RE Botanicals မှ Hemp Peppermint Tincture
စျေးနှုန်း: ၆၇.၉၉ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
ကြံအရက်ထုတ်ယူမှု (CO2 ဘယ်တော့မှမပါ)
နာကျင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု၊ စိုးရိမ်သောကနှင့် PTSD ကဲ့သို့အခြားအရာများစွာအတွက်အလွန်ကောင်းသည်။
RE ရုက္ခဗေဒအရရောင်းရငွေ၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်းကိုပြန်လည်စိုက်ပျိုးသောစိုက်ပျိုးရေးအတွက်လှူဒါန်းပြီးလယ်သမားများကျန်းမာသန်စွမ်းသောမြေဆီလွှာများဖန်တီးရန်ကူညီသည်။
အသက် ၁၈ နှစ်အောက်သုံးရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်မဟုတ်ပါ
Hemp သည်အိပ်ပျော်ရန်အခက်အခဲများကိုသက်သာစေပြီးအိပ်မပျော်ခြင်းကိုသက်သာစေသည့်စိုးရိမ်သောကကိုလျှော့ချပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်နာတာရှည်နာကျင်ခြင်းကိုကူညီသည်၊ ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိသူများ၌ REM အပြုအမူမူမမှန်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်၊ PTSD ဝေဒနာရှင်များကိုကူညီသည်။ အခြားကောင်းသောအရာများစွာ မရ။
ရိုးရှင်းသောအော်ဂဲနစ်ပါဝင်ပစ္စည်းများမှထုတ်လုပ်ထားသောဤလျှော် tincture သည်တစ်နေကုန်အကြာတွင်အေးဆေးငြိမ်သက်သောလေထုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Original နှင့် Peppermint တို့တွင်ရနိုင်သည်၊ ဤ tinctures များသည်မည်သည့်လက်ဖက်ရည်၊ အသုပ်သို့မဟုတ်အစာစားရန်မဆိုအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သင်ဟာအလုပ်သမားတစ်ယောက်၊ ဂျက်လေယာဉ်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်အနားယူဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒီအော်ဂဲနစ်နဲ့ USDA ကအတည်ပြုထားတဲ့လျှော်ဆီကစိတ်ကိုအေးချမ်းစေပြီးစိတ်အပန်းပြေစေတဲ့ညနေခင်းအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သောအကြံပြုချက် - အရည်အနည်းငယ်ကိုသင့်လျှာအောက်တွင်စက္ကန့် ၂၀ ကြာစုပ်ယူထားပါကချက်ချင်းသက်သာစေရန်။
အပိုဆုလိုလားသူအစွန်အဖျား။ လာဗင်ဒါမရှိမဖြစ်ဆီနှင့် Epsom ဆား မရ။ မီးပိတ်ပြီးဖယောင်းတိုင်အချို့ထွန်းပါ။ ထို့နောက်ဆေးခြောက် tincture ကိုသောက်ပါ၊ စုပ် ယူ၍ အနားယူပါ။ ဒီညမင်းဘဝမှာအကောင်းဆုံးအိပ်ပျော်လိမ့်မယ်။
RE ရုက္ခဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် Hemp Peppermint Tincture ကိုဤနေရာတွင်ပိုရှာပါ။
Moonlight Slumber မှ Comfort-U Total Body Support Pillow
စျေးနှုန်း: ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
ဤအထူးခေါင်းအုံးသည် 5'2'5'7 'မှလူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင်၏ SO သည်မနာလိုဖြစ်နိုင်သည်။ :(
Ergonomically ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိစေသောကျင့်ဝတ်နှင့်အညီဖြည့်စွက်ထားသောဤစူပါနူးညံ့ပြီးချိန်ညှိနိုင်သော ၅၅ လက်မခေါင်းအုံးသည်၎င်း၏အမွေးနုများကိုထိန်းထားစဉ်အဆုံးစွန်သက်သာစေသည်။
စနစ်တကျသုံးသောအခါဤခန္ဓာကိုယ်ခေါင်းအုံးသည်သူမ၏တင်ပါးနှင့်ကျောရိုးကိုကြားနေအနေအထား၌ထားစေပြီးအဆစ်နာခြင်း၊ နောက်ကျောနာကျင်ခြင်းနှင့်ခြေထောက်ဖောရောင်ခြင်းတို့ကိုသက်သာစေသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကိုထိန်းညှိရန်လည်းကူညီသည်။
လရောင်အိပ်ပျော်နေသောခေါင်းအုံးကိုမျှော်လင့်သောမိခင်များအတွက်စိတ်ကူးပုံဖော်ခဲ့ပေမည်၊ သို့သော်မည်သူမဆို (အထူးသဖြင့်ဘေးစောင်းအိပ်သူများ) သည်ဤခေါင်းအုံး၌သက်တောင့်သက်သာများစွာတွေ့လိမ့်မည်။ တကယ်တော့သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကသင်ဟာသက်တောင့်သက်သာနဲ့သက်တောင့်သက်သာအိပ်ပျော်ဖို့တောင်မှလွင့်မျောသွားနိုင်ပါတယ်။ အနှောင့်အယှက်မရှိပါ။
မင်းက ၅ ပေ ၇ လက်မထက်ပိုမြင့်လား။ ၎င်းကိုအစားထိုးကြည့်ပါ။
Comfort-U Total Body Support Pillow အချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ရှာပါ။
NeuroBiologix မှ Neuro Night Essentials Sleep Supplement
စျေးနှုန်း: ၄၁.၅၀ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
သတိမေ့ခြင်းမရှိဘဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်တူသည်ဟုဝေဖန်သူတစ် ဦး ကဆိုသည်
ဘာအတွက်လဲ၊ ဒါကနည်းနည်းစျေးကြီးတယ်။ အချို့လူများသည်ဒေါ်လာ ၆ melatonin တစ်ပုလင်းဖြင့်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံ melatonin သည်မလုံလောက်ပါ။လူကြိုက်များတဲ့အိပ်စက်ခြင်းဖြေရှင်းနည်းတွေမှာပါ ၀ င်တဲ့အရာတွေကိုငါခဏကြည့်ခဲ့တယ်ဒီအထဲကပါဝင်ပစ္စည်းများကိုငါတကယ်ကြိုက်တယ်။ ၎င်းသည်သင့်ကိုအိပ်ငိုက်စေကာအိပ်ရာမ ၀ င်မီအပန်းဖြေမှုကိုအားပေးစေသည်။ ၎င်းတို့သည်ရိုးရှင်းပြီးတစ်ခုစီတွင်သူ့နေရာနှင့်သူရှိသည်။
Magnesium Ascorbate အိပ်မပျော်ခြင်းသည်မဂ္ဂနီဆီယမ်ချို့တဲ့ခြင်း၏အဖြစ်များသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မဂ္ဂနီဆီယမ်နည်းသောသူများသည်မကြာခဏအိပ်ရေးမ ၀ ခြင်းနှင့်မကြာခဏကြားဖြတ်ခြင်းတို့ကိုခံစားရသည်။ ကျန်းမာသောမဂ္ဂနီဆီယမ်အဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအိပ်စက်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Valerian သဘာဝတရား၏ Xanax
ကိလေသာပန်း : စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစကားပြောခြင်းကိုငြိမ်သက်စေသည်
ဂျာမန် chamomile လက်ဖက်ရည်နှင့်အလှအပတို့တွင်တွေ့ရများသောစိတ်အပန်းဖြေပန်း
ရှေ့ပိုင်း Gamma-amino butyric acid သည် ဦး နှောက်တွင်အဓိကတားဆီးပေးသော neurotransmitters တစ်ခုဖြစ်သည်။ GABA သည်စိတ်ငြိမ်စေသောအာနိသင်ကိုပေးသည်နှင့် serotonin ပေါင်းစပ်မှုတွင်တိုက်ရိုက်အခန်းကဏ္မှပါဝင်သည်။ စိတ်ခံစားချက်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကောင်းမွန်စေသည်။
L-Theanine : အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းနိုးကြားခြင်းကိုအားပေးသည်။
Melatonin Melatonin သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ pineal ဂလင်းများတွင်ထုတ်လုပ်သောသဘာဝဟော်မုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်၌ melatonin ရှိသည်။ ၎င်းသည်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်နိုးစက်ဝန်းကိုထိခိုက်စေပြီးညအချိန်တွင်အမြင့်ဆုံးသို့ရောက်သင့်သည်။ ရံဖန်ရံခါစိတ်ဖိစီးမှု၊ နာမကျန်းမှု၊ ဟော်မုန်းမညီမျှမှု၊ အခြားကိစ္စများကြောင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောစက်ဝန်းကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဖြည့်စွက်စာဖြစ်သော melatonin သည်သင့်အားအမြန်လမ်းကြောင်းပေါ်ပြန်ရောက်စေသည်။
Neuro Night Essentials Sleep Supplement အချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ပိုမိုရှာပါ။
4. Smart Nora, Under-Pillow Stop Snoring ကိရိယာ
စျေးနှုန်း: ဒေါ်လာ ၂၃၂.၀၉ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
သင်အိပ်ရန်ဆူညံသံစက်ကိုသုံးလျှင် Smart Nora သည်အသံများကြောင့်စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားနိုင်သည်
များစွာရှိပါသည် ဟောက်သောကိရိယာများကိုရပ်တန့်ပါ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နိုင်သောနေရာရှိသော်လည်း၎င်းတို့အများစုသည်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခြင်း၊ မသက်မသာဖြစ်စေခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏အိပ်စက်ခြင်းကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်သည်။
Smart Nora ကိရိယာဖြင့်သင်အကြိုက်ဆုံးခေါင်းအုံး - မည်သည့်ခေါင်းအုံးကိုမဆို ထား၍ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ (အစာအိမ်၊ ဘေး၊ နောက်) မည်သည့်နည်းနှင့်မဆိုအိပ်နိုင်ပါသည်။ အလုပ်လုပ်တုန်းပဲ။
ကိရိယာကို snorer ၏ခေါင်းအုံးအောက်တွင်ထားပါ။
သင်အိပ်နေစဉ် Smart Nora သည်သင်၏ဟောက်သံကိုသိရှိပြီးဖောင်းကားစေပြီးခေါင်းကိုညင်ညင်သာသာနှင့်ပုံမှန်အသက်ရှူပြန်ပေးရန်ခေါင်းအုံးကိုကျုံ့စေသည်။
Smart Nora ကိုနေရာတိုင်းတွင်စုံတွဲများနှစ်သက်သည်။
နောက်ထပ် Smart Nora၊ Under-Pillow Stop Snoring Device အချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ရှာပါ။
ဗွီဒီယိုစမတ်နိုရာ၊ ခေါင်းအုံးအောက်တွင်ဟောက်သံရပ်သောကိရိယာနှင့်ပတ်သက်သောဗီဒီယို2019-04-23T12: 34: 25-04: 00
5. Celestial Seasonings မှ Sleepytime Extra Wellness Tea
စျေးနှုန်း: ဒေါ်လာ ၂၃.၃၄ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
Sleepytime Extra သည်ပိုမိုတည်ငြိမ်အေးချမ်းသောအာနိသင်အတွက် valerian အမြစ်အပိုရှိသည်
သင်ဤဆောင်းပါးကိုဖတ်လျှင်သင်ယခင်က Sleepytime လက်ဖက်ရည်ကိုသောက်ဖူးသည့်အခွင့်အလမ်းရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဒါကစွန့်စားရကျိုးနပ်ပြီးဒီနေရာမှာမပါ ၀ င်ပါဘူး။
မသိသေးသူများအတွက် Sleepytime လက်ဖက်ရည်သည်သင့်အားအေးချမ်းသောအိပ်ငိုက်စေသောမှော်အဖျော်ယမကာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မင်းရဲ့လက်ဖက်ရည်သောက်ပြီးမိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာမင်းဟေ့လိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်၊ ငါအိပ်ရာထဲဝင်ပြီးမျက်လုံးမှိတ်သင့်တယ်။
နှင့်ရောစပ်ထားသည်chamomile နှင့် valerian အမြစ်၊ သဘာဝအတိုင်းစိတ်အပန်းပြေစေသောဆေးဖက်ဝင်အပင်များ၊ ဤကြိုးမဲ့ teabags များသည်သဘာဝအားဖြင့်ကဖိန်းဓာတ်ကင်းစင်ပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်ဖက်သည်။
၎င်းသည်အရသာအလွန်ကောင်းသည်။ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များပေါင်းစပ်မှုတွင်ပူဒီနာ၊ chamomile၊ lemongrass၊ လိမ္မော်ရောင်ပန်း၊ rosebuds နှင့်အခြားအရာများပါ ၀ င်သည်။ ငါကငါ့ရဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းသောက်တာကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းသကြား၊ ပျားရည် (သို့) သံပုရာသီးထည့်တာကိုမင်းပျော်နိုင်တယ်။ စုစုပေါင်းလက်ဖက်အိတ် ၁၂၀ ပါ ၀ င်သည်။
Valerian အပိုမလိုဘူးလို့ထင်ရင်စမ်းကြည့်ပါ ပုံမှန် Sleepytime လက်ဖက်ရည် ဒါမှမဟုတ် Sleepytime Detox ပါ မရ။ မင်းဖျားရင်ပျော်လိမ့်မယ် Sleepytime Echinacea အပြီးအစီးဂရုစိုက်ပါ ရ၊ Sinus Soother ဖြစ်သည် , ဒါမှမဟုတ် လည်ချောင်း Tamer မရ။
Celestial Seasonings အချက်အလက်များနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့် Sleepytime Extra Wellness Tea ကိုဤနေရာတွင်ရှာပါ။
ဗွီဒီယိုကောင်းကင်မှဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များဖြင့်အိပ်စက်ချိန်ပိုမိုကျန်းမာစေသောလက်ဖက်ရည်နှင့်ပတ်သက်သောဗီဒီယို2019-03-11T23: 43: 37-04: 00
စျေးနှုန်း: $ 22.99 Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
အခန်း (သို့) ရေချိုးဖြန်းဆေးအဖြစ်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်
ပထမတော့အနံ့ကပြင်းတယ်။ အိပ်ရာမ ၀ င်မီမိနစ်အနည်းငယ်တွင်ဖြန်းပေးပါ
ခေါင်းအုံးမှူကိုသင်စမ်းဖူးသလား။ မဟုတ်ရင်ဒါဟာရိုက်ချက်နဲ့ထိုက်တန်ပါတယ်။ Lavender သည်စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျစေသောဂုဏ်သတ္တိကြောင့်လူသိများသည်၊ ထို့ကြောင့်အနံ့သည်သင့်ကိုနှစ်ခြိုက်စွာအိပ်ပျော်စေသည်။
ဒီဖြန်းဆေးကမင်းရဲ့ခေါင်းအုံးတွေကိုမစွန်းပေမဲ့လာဗင်ဒါနဲ့ chamomile ရဲ့သန့်ရှင်းပြီးသဘာဝရနံ့တွေနဲ့အတူစိတ်အပန်းပြေစေမှုနဲ့ငြိမ်သက်မှုတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။
ထို့အပြင်၎င်းတွင်သင် ၀ ယ်ယူခြင်းဖြင့် download လုပ်နိုင်သောလမ်းညွှန်အိပ်စက်ခြင်းတရားထိုင်ခြင်း/အသံဖိုင်ပါ ၀ င်သည်။
မနက်မိုးလင်းရင်သင်နိုးဖို့အခက်အခဲရှိရင်သူတို့ကြိုးစားကြည့်ပါ ဆေးဖြန်းခြင်းကိုမြှင့်တင်ပါ ယူကလစ်နှင့်ပူဒီနာတို့ကိုပေါင်းစပ်ထားသော
RELAX, Lavender & Chamomile Pillow Mist သတင်းအချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ပိုမိုရှာပါ။
7. ၁၀၀% မီးပျက်ကုလားကာများ၊ အပူလျှပ်ကာအသံလုံကုလားကာပြားများ
စျေးနှုန်း: ၃၈.၉၅ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
Soundproof သည်ဤနေရာတွင်နှိုင်းရအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပုံရသည်။ ၎င်းသည်အသံပိတ်ထားသော်လည်းလုံးဝမပြည့်စုံပါ။
မင်းဟိုတယ်ကိုဘယ်လိုသွားလဲဆိုတာမင်းမသိတာနဲ့ကုလားကာတွေကအလင်းတစ်စက်မှမထွက်စေနဲ့၊ မနက်မိုးလင်းရင်မင်းသေချာမသိဘူး၊ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုပြန်ဆွဲထုတ်ပြီးနေရောင်ခြည်အပြည့်နဲ့မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးရမလား။
သင်ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားသည်အထိအလင်းသည်သင့်ကိုနိုးကြားစေကြောင်းသင်သတိမပြုမိပါ၊ ဤကုလားကာများသည်အိပ်စက်မျက်နှာဖုံးထက် ပို၍ ၀ င်ရောက်နိုင်ခြေနည်းသည်။
ဤအရာများသည်အသံလုံလည်းမပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်ငှက်များ၊ ဟောင်သံများ၊ နေရောင်ခြည်များ၊ မြို့လမ်းများကိုသင်ကာကွယ်လိမ့်မည်၊ ဖြူစင်သော၊ မှောင်မိုက်သောပျော်ရွှင်မှုရှိလိမ့်မည်။
လေးလံသောကုလားကာများသည်ဆောင်းရာသီ၌အပူကိုထိန်းရန်နှင့်နွေရာသီတွင်နေရောင်ခြည်ကိုကာကွယ်ရန် insulator ကဲ့သို့နှစ်ဆတိုးသည်။
၁၀၀% မီးပျက်ကုလားကာများ - အသံလုံကုလားကာပြားများသတင်းအချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ပိုမိုရှာပါ။
၈။ Bose Noise Masking Sleepbuds
စျေးနှုန်း: ၂၉၉.၀၀ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
မင်းကသူတို့ရဲ့သာလွန်တဲ့အသံအရည်အသွေးကြောင့်လူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်တဲ့ Bose နဲ့မင်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤအရာသည်နောက်သို့အနည်းငယ်ဆုတ်သွားပုံရသည်။ အကြောင်းမှာအသံကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်အစား၎င်းကိုပိတ်ဆို့စေသည်။ အဖြူရောင်ဆူညံသံသို့မဟုတ်ဆူညံသံကိုပယ်ဖျက်နိုင်သောနည်းပညာနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောသာယာသောအသံများသည်ပျော်ရွှင်သောအိပ်စက်ခြင်းနှင့်ညီသည်။
Bose သည်ဆူညံသံကိုပယ်ဖျက်နိုင်သောနည်းပညာကို ဦး ဆောင်ခဲ့သော်လည်းသူတို့၏သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဖုံးကွယ်ခြင်းထက်ဂီတကိုဖုံးကွယ်ခြင်းသည်အိပ်စက်ခြင်းအတွက်ပိုကောင်းသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
Bose Noise Masking Sleepbuds အချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ပိုမိုရှာပါ။
9. Xlear Nasal Spray ကို Xylitol နှင့်တိုက်ပါ
စျေးနှုန်း: ၁၀.၉၇ ဒေါ်လာ Amazon ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Amazon မှာစျေးဝယ်ပါ အားသာချက်များ
နာတာရှည် sinus နာကျင်မှု၊ နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်းနှင့် devpt septum ဝေဒနာရှင်များအတွက်သက်သာစေသည်
အသက်ကယ်သမားဟုဝေဖန်သူတစ် ဦး ကဆိုသည်
Xylitol သည်ခွေးများအတွက်အလွန်အန္တရာယ်များသည်။ ၎င်းသည်ဟာသမဟုတ်ပါ၊ ပမာဏအနည်းငယ်ကပင်သူတို့ကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ကြောင်များအတွက်အကောင်းဆုံးလည်းမဟုတ်ပါ။ ဤအရာကိုအမွေးထူသောသူငယ်ချင်းများနှင့်ဝေးဝေးလုံခြုံသောနေရာတွင်ထားပါ။
မင်းခေါင်းကိုခေါင်းအုံးနဲ့ထိလိုက်တိုင်းနှာခေါင်းပိတ်နေသလား။ နှာခေါင်းဖြန်းဆေးသည်သင်၏ညအချိန်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကိုကုသပေးနိုင်သည်။ ပိုကောင်းသောအသက်ရှူခြင်း = ပိုကောင်းသောအိပ်စက်ခြင်း၊ ဟောက်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေပြီးနေ့ခင်းဘက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
Xylitol သည်လူအများကြား၌ပါ ၀ င်သောသကြားအရက်တစ်မျိုးဖြစ်သည် keto အစားအစာအစားအစာများ ၎င်း၏ glycemic index နိမ့်သောကြောင့် ၎င်းသည်လျှို့ဝှက်လက်နက်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်များနှင့်ဘက်တီးရီးယားများကိုသတ်စေပြီးသင်၏နှာခေါင်းပေါက်များကိုဖွင့်ပေးသည်။
ဒါကိုနှာခေါင်းဖြန်းဆေးနဲ့တိုက်ပါ xylitol steroids နှင့် anti-histamines spray များဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်မှကင်းလွတ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏နှာခေါင်းတစ်သျှူးပေါ်တွင်ဘက်တီးရီးယားများကပ်ငြိခြင်းကိုလျော့ချပေးခြင်းဖြင့်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ဓာတ်မတည့်မှုလက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်အစွမ်းထက်သောခံတွင်းနှင့်အပေါ်ပိုင်းကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်။
အခြေခံအားဖြင့် TL; DR: ၎င်းသည်သင်၏နှာခေါင်းကိုရှင်းလင်းစေပြီးသင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာအိပ်ပျော်စေပါသည်။
Xylarol သတင်းအချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များဖြင့် Xlear Nasal Spray ကိုပိုမိုရှာဖွေပါ။
10. Lavender Epsom ဆား (၁ ဂါလံပုံး၊ ၈ ပေါင်)
ကုသနိုင်သောရေချိုးခန်း ၁၆ ခန်းအထိဆွဲပါ။
ရနံ့ကုထုံး - စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းပြီးကြာရှည်ခံသော lavender အနံ့သည်အပန်းဖြေရန်ကူညီသည်။
ရေချိုးပြီးအပန်းဖြေတဲ့အချိန်ကိုသင်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်နှိုးစက်ထားတာပိုကောင်းတယ် :)
ဤပုံကိုကြည့်ပါ။ Epsom ဆားဖြင့်ရေးဆွဲထားသောရေချိုးခန်း ရေချိုးခန်းတစ်ဝိုက်တွင်ဖယောင်းတိုင်ခြောက်မီးတောက်နေသည်။ ဝိုင်နီတစ်ခွက်။ ငြိမ်းချမ်းသောဂီတ။ CBD ဆီတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။
Epsom ဆားများကိုသဘာဝစမ်းရေတွင်တွေ့ရသောမဂ္ဂနီဆီယမ်ဆာလဖိတ်မှရရှိသည်။ ဤနေရာတွင် Epsom ဆားများကို lavender အဆီဖြင့်ရောပြီး၎င်းသည်၎င်းတို့အားအလွန်ကြာမြင့်သောနေ့တစ်နေ့အပြီးတွင်အဆုံးစွန်ဆုံး buster ဖြစ်စေသည်။
သန့်စင်သော Epsom ဆားသည်ပူနွေးသောရေတွင်လွယ်လွယ်ကူကူပျော်ဝင်စေပြီးစိတ်ဖိစီးမှုကင်းစင်ပြီးလာဗင်ဒါပန်းအပြည့်အ ၀ ရေချိုးသည်။ မင်းတကယ်လုပ်နိုင်တယ် ခံစားမှု အဆိပ်အတောက်များသင့်ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်သည်။ Epsom ဆားများ ကြွက်သားများနာကျင်ခြင်း၊ အဆစ်နာခြင်းမှသက်သာစေပြီးကောင်းမွန်သောအိပ်စက်မှုရရှိရန်ကူညီသည်။
Earthborn Elements ၏ Epsom ဆားကိုကုသရန်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရကူညီရန်ဖန်တီးထားသည်။ ဒါဟာမင်းရဲ့တစ်နေ့တာကိုအများကြီးအကျိုးရှိစေတာမို့မင်းရေချိုးခန်းထဲမှာမင်းရဲ့အချိန်အများစုကိုကုန်ဆုံးချင်နေနိုင်တယ်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုငါတို့လုံးဝသဘောတူတယ်။
Lavender Epsom Salt (1 Gallon Bucket, 8 lb) အချက်အလက်နှင့်သုံးသပ်ချက်များကိုဤနေရာတွင်ရှာပါ။
မတ်လ ၁၀-၁၆ သည်အမျိုးသားအိပ်စက်မှုသတိတရားရက်သတ္တပတ်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံရှိအားလပ်ရက်များနောက်သို့လိုက်နိုင်သည်။
National Sleep Foundation ၏ပန်းတိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အိပ်ချိန်ကျန်းမာရေးနှင့်အလေ့အထများကိုကြည့်ရန်ဤအပတ်ကိုယူရန်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်အတွက်ဆောင်ပုဒ်သည်အိပ်စက်ခြင်းဖြင့်စတင်ခြင်းသည်လူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်မိသားစုပန်းတိုင်များကိုအကောင်းဆုံးအောင်မြင်ရန်အရေးကြီးကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။ တိုတောင်းသောသို့မဟုတ်ဒုက္ခပေးသောအိပ်စက်ခြင်းသည်နေ့တွင်မှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအားနည်းခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
ဒီရွေးချယ်မှုတွေကိုကြိုးစားတာအပြင်မင်းကိုအိပ်ငိုက်စေတဲ့အခမဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ မင်းကြိုးစားနိုင်တယ် ...
အိပ်ရာမ ၀ င်မီနည်းပညာအသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်ပါ
၄-၇-၈ အသက်ရှူ (ဒါဟာတကယ်အလုပ်လုပ်တယ်!)
အကောင်းဆုံးအိပ်စက် Trackers (2019)
၂၀၁၉ တွင်ဟောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန် ၁၀ ခု
အနိမ့်ဆုံးအဖျား ၉၉ ဒီဂရီဖြစ်သည်
melatonin ၂၀ မီလီဂရမ်သောက်ရန်အဆင်ပြေသလား
ငါ့ရဲ့ creatinine အဆင့်ကိုဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ